Veza umfanekiso kwiGoogle Earth - Geofumadas
NgoJuni, 2009 Google umhlaba / imephu
Masithi ndifuna ukubonakalisa ubume bendawo umfanekiso ofumaneka kwiwebhusayithi.
Besendithetha oku ngaphambili, kodwa kule meko ndifuna ukuvelisa imephu engekho kwi-hard drive yam kodwa kwi-Intanethi. Le yimeko yemephu yeempazamo zejometri eHonduras kwaye iyafumaneka kwiwebhusayithi kaGqr. Robert S. Rogers.
Okokuqala, siyikhuphela kwaye siyibeka kwi-hard drive.
Ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ekubeni iliphepha elinomlinganiselo omkhulu kune-1 kwisigidi esinye, yigeze kuso chilazo Kwanele. Oko kwenziwa ngokungenisa njengomfanekiso ongqonge ngaphezulu kwaye ke wolule de imida idibane; ukuba bendinokuphelisa ukulungelelanisa, bekuya kuba kuchanekile ngakumbi ukuyifaka kwi-lat / lon.
Ngaphandle koko, ndicwangcise i-opacity eyi-65% ye-opacity.
Nje ukuba yenziwe, igcinwa njenge-kml ye-1 kb nje.
1 Ukulungisa i-kml
Okokuqala, masibone ukuba i-kml ayiqukethe umfanekiso, kodwa ibhekisa kwindawo igcinwe kuyo:
<color> 91ffffff </color>
<viewBoundScale> 0.75 </viewBoundScale>
I-<North> 16.77506106182943 </north>
<south> 12.24368463513841 </south>
<east> -82.69883751605062 </east>
<west> -89.70371452334636 </west>
Ke ukwenza iifayile ze-kml zeminye imifanekiso, kuya kufuneka uhlele ifayile ngesincedi, utshintshe idilesi yediski yalapha komfanekiso obanjelwe kwiwebhu kunye negama. Yazi wena, incwadana ungayihlela ifayile ye-kml, kmz hayi ngenxa yokuba yifayile exineneyo.
Oko kunokwenziwa kuGoogle Earth, ukuguqula iipropathi zomaleko. Bona ukuba utshintshe nje i-URL, kuzo naziphi na iimephu ezikhoyo kuloo webhusayithi, ndinako ukwenza ukuthunyelwa kuba zithunyelwe ngendlela efanayo.
Ngendlela, jonga ngoku ngokubonisa iziqalo zeenyikima ezenzekileyo ukusukela nge1970.
Apha banako bona i-kml kumzekelo.
Este elinye inqaku Thetha malunga nokusilela kuboniswe kwinkonzo epapashiweyo
Post edlulileyo«Edlulileyo Qhagamshelana, ii-seminars ze-151 kwi-intanethi
Post Next Izivumelwano ze-5 kwiinkathazo zezopolitikoOkulandelayo "
I-5 iphendula "bonisa umfanekiso okhethiweyo kwiGoogle Earth"
Imephu zikaGoogle azinakho ukukhetha ukutshintsha i-opacity, ngaphandle kokuchukumisa i-API
Ngaba le kml isebenza ngokufanayo kwiimephu zikaGoogle?
UAllan Lopez uthi:
Obalaseleyo !!, ngoku ewe!
Emva kokubhukuqwa, ukhetha umfanekiso kwiqela lasekhohlo, iqhosha lasekunene kwaye ukhethe iipropathi.
Emva koko ubona iikona ziluhlaza, ongazolulela ekuthandeni kwakho, njengeqhosha eliphakathi ukuze ujikeleze.
Iresiphi inomdla kakhulu, kodwa andazi ukuba ungawoluhlutha njani okanye uwurhuqa umfanekiso emva kokungenisa njengomfanekiso ogqithileyo. Andiqhutywa naziphi na izixhobo okanye imiyalelo. Injani into ???
Ezona zinto zintle kunye nombulelo kwakhona ngenqwelomoya.